Duqaymo Diyaaradeed oo ka dhacay Jubada Hoose | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Duqaymo Diyaaradeed oo ka dhacay Jubada Hoose
Duqaymo Diyaaradeed oo ka dhacay Jubada Hoose
Wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan inay halkaas diyaarado duqaymo ka Gaysteen waxaan ka dhashay Khasaare sida ay Warbaahinta Guduhu sheegayso.
Duqeeyntaan ayaa kadhacday degaanka Buurta kuumba oo qiyaastii 12 kiilo mitir u jirta magaalada jamaame ee gobolka Jubbada Hoose.
Saraakiil Ciidan ayaa sheegay in duqeynta lala beegsaday Xarumo Al-Shabaab ay Ciidamadooda ku tababari jireen, isla markaana lagu dilay 15 Xubnood oo isugu jira Saraakiil iyo Xubno kale oo dhamaantooda shabaab ahaa.
Warka ka soo baxay Taliska Ciidanka Soomaaliyeed ayaa sheegaya in Sidoo kale Duqayntaan lagu burburiyay xarun kooxaha argagixisada ah ay lahaayeen oo kutababarijireen maleeshiyaadkooda.
Duqeeynta ayaa waxaa iska kaashaday Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliya iyo saaxiibadooda caalamka sida ay Idaacadda ku hadasha Codka Ciidamadda Qalabka Sida ee Soomaaliya u sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybta 43-aad ee Gobolka Jubada Hoose ka howlgala.
Saraakiishu ma faah faahin Magacyada Xubnaha iyo Saraakiisha shabaabka ah ee duqeynta lagu dilay, balse waxay sheegeen inay dib Warbaahinta ugu faah faahin doonaan howlgalkaan ka dhacay jubada Hoose ee lagu beegsaday Xarumaha shabaabka.
Degaano ka tirsan Gobolada Jubbooyinka ee Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa waxaa inta badan ka dhacay duqeyn uu Mareykanka sheego inuu ku dilo Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab walow mararka qaar ay waxyeelo kasoo gaarto dadka Shacab ah ee ka agdhow deegaanada Weerarada laga Fuliyay.
Previous articleDhimashada ka dhalatay iskudhacyada maxaabiista Ecuador oo korortay
Next articleDHAGEYS:Booliska Puntland oo faahfaahin ka bixiyay dhacdo Garwore ka dhacday